Galaxy M31 malitere imelite na Android 11 na One UI 3.0 | Gam akporosis
Galaxy M31 malitere imelite gam akporo 11 na One UI 3.0
Samsung si M nso aghọwo otu n'ime ndị kasị ihe ịga nke ọma na ahịa na-adịbeghị anya, a nso na Samsung na-na-elekọta pụrụ iche. Galaxy M31, ruru ụdị 2.5 nke One UI ikpeazụ nke November. Ọnwa abụọ ka e mesịrị, Samsung emelitere ya ọzọ iji nweta One UI 3.0 ugbua na gam akporo 11.
N'ụzọ nke a, M31 ghọrọ Samsung ama ama ama ama ama ama ama ama kacha ọhụrụ na gam akporo 11 ma gụnye ihe mkpuchi nhazi nke ọhụụ nke, n'oge a, anyị nwere ike ịchọta na njedebe dị elu nke Samsung nke emelitere.
Firmware maka mmelite a bụ nọmba M315FXXU2BUAC, mmelite ahụ gụnyere akụkụ nchebe nke dabara na ọnwa Jenụwarị 2021. N'oge a ọ dị naanị na India, yabụ, ọ bụ izu ole na ole, ma ọ bụ ikekwe ụbọchị ole na ole, tupu ya erute n'ahịa ndị ọzọ ebe ụlọ ọrụ Korea tinyela ọnụ a maka ire ere.
Ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị ọrụ ndị na-achọ mgbe niile ịnọ n'etiti ndị mbụ ịnụ ụtọ atụmatụ ọhụrụ Samsung na-agbakwunye na mmelite ọ bụla, ị nwere ike kwụsị site na weebụsaịtị SamMobile y budata ngwa ngwa kwekọrọ.
Ee, ị ga-achọ PC inwe ike ịmebe usoro nrụnye yana, na nwute, mee nkwado zuru oke ma ọ bụrụ na ihe nwere ike ịgahie n'oge usoro ahụ.
You ga-enweta mmelite abụọ ọzọ?
Mgbe Samsung kwupụtara na ọ na-agbanwe usoro mmelite ya site na 2 ruo afọ 3, ekwughi ya ma oburu na uzo M tinyere, Ya mere, o yikarịrị ka ị ga-enweta mmelite ọhụrụ ma site n'ebe ahụ, malite ịnata mmelite nche nchebe.
Anyị ga-echere otu afọ iji hụ ma ọ bụrụ na usoro mmelite ọhụụ Samsung gbatịrị na Samsung's M, otu n’ime uru kachasị mma maka ego ụlọ ọrụ Korea na-enye ugbu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Galaxy M31 malitere imelite gam akporo 11 na One UI 3.0
Gwuo usoro egwuregwu abụọ mbụ nke fig, ihe omimi nke Tim Burton n'efu
Etu esi ekpochi ihuenyo mkpanaka gị ka igwu egwu YouTube na-enweghị mmetụ ọzọ